“Ma doonayo inaan ka tago kooxda Manchester United” – tababare Solskjær – Gool FM
“Ma doonayo inaan ka tago kooxda Manchester United” – tababare Solskjær
(Manchester) 03 Jan 2018. Macalinka kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu sii joogo Red Devils xilli ciyaareedka soo aadan, kadib markii uu gaaray guushiisii 4-aad xiriir ah ee horyaalka Premier League, kulankii ay xalay 2-0 kaga adkaadeen Newcastle United.
Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa shaqada kooxda Manchester United si ku meel gaar ah ula wareegay 19-ka bishii December ee lasoo dhaafay, wuxuuna qorshaha yahay inuu sii wadi doono ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedkan.
Kadib markii uu soo idlaaday kulankii ay guusha ka gaareen kooxda Newcastle United ayuu sheegay tababare Solskjær inuu doonayo sii wadida shaqada tababarka ee Manchester United xitaa xili ciyaareedka soo aadan wuxuuna yiri: “Ma doonayo inaan baxo”.
“Manchester United waa koox ay ku sugan yihiin xidigo aad u wanaagsan, jawiga waa mid aad u fiican, balse xaalada waxay ku xiran tahay kulanka soo aadan, kadib kan xiga, kadibna kan kaloo sii xiga”.
“Waxaan qabanayaa shaqada la ii idmaday inta aan halkan joogo”, ayuu hadalkiisa kusoo xiray tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær.
Kulankii Xalay, malaha waa kii ugu dambeeyay uu ciyaaro Chelsea...(SAWIRRO Caddeyn u noqon kara inuu tagayo Fabregas)
MAN CITY vs LIVERPOOL: Arag Safafka ay ku soo gali karaan kulanka la wada sugayo ee Caawa